Dowladda Soomaaliya oo ciidamo hor leh ka dejisay Gedo | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Soomaaliya oo ciidamo hor leh ka dejisay Gedo
Ciidamadaan oo ka tirsan Guutada Gorgor ayaa laga dejiyay degmada Doolow ee gobolka Gedo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Soomaaliya ayaa diyaarad sidday ciidamo hor leh ka dejisay degmada Doolow ee Gobolka Gedo ee Koofurta Soomaaliya.
Ciidamadaan oo ka tirsan Guutada Gorgor ayaa waxaa hor kacayay taliyaha ciidamada xasilinta Gobolka Gedo Bakaal Kooke oo maalmahaan ku sugnaa magaalada Muqdisho, waxaana la sheegayaa in ciidamadaan tiro ahaan gaarayaan ku dhawaad 100 askari.
Ibraahim Nuur Xaaji Macalimuu oo ah guddoomiyaha gobolka Gedo iyo masuuliyiin kale ayaa ciidamadaan ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha Doolow, iyadoona ciidamadaan ay ka qeyb qaadan doonaan dagaalka lagula jiro Al-shabaab ee ka socdo gobolada jubbooyinka iyo Gedo.
Inta badan degmooyinka gobolka Gedo ee Koofurta Soomaaliya waxaa haatan gacanta ku haya ciidamada dowladda, balse waxaa la sheegayaa in ay ciidadamaan qeyb ka yihiin guluf dagaal ay dowladda Soomaaliya ku dooneyso in ay Al-Shabaab kaga xoreyso deegaanadda ay ku suganyihiin.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhowr jeer oo hore ciidamo ku daabushay gobolka Gedo, kuwaas oo qorshahooda ahaa in loo istcimaalo dagaalka siyaasadeed ee ay kula jirtay maamulka Jubbaland oo haatan mid qabow isku bedelay kadib markii wada hadallo dhex mareen labada dhinac.